Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo aqbalay inuu booqdo Moscow… – Hagaag.com
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo aqbalay inuu booqdo Moscow…
Wakaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay baahisay hoggaamiyaha dalka Kim Jong-un inuu oggolaaday inuu Moscow booqdo si uu shirka laba geesoodka ah uu uga qayb galo.
Iclaaminta hoggaamiye Kim ayaa waxay ku soo beegantay xilli uu wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov uu booqasho ku tagay Kuuriyada Koonfureed.
Wakaaladdu waxaa kale ee ay sheegtay xilligi ay kulmeen Mr Lavrov iyo hoggamiyaha Kuuriyada Waqooyi inuu Kim caddeeyey mowqifkiisa ku aaddan sida ay uga go’an tahay baabi’inta hubka niyuukilarka iney waxba iska beddeleyn.
Mr Kim oo sheegay iney arrintani ay u dhici doonto “tallaabbo tallaabbo” furana ay u tahay wadahadalka dalkiisu uu la yeelan doona Mareykanka oo doonayo inuu waddankiisu hubka baabi’iyo iyada oo ay jirin wax cunaqabateyn ah oo laga dabciyey dalkiisa.
Mar sii horreysay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa wuxuu sheegay iney horumar wanagsan laga sameeyey wadahadalki khamiisti magaalada New York uu kula yeeshay xubin uu aadka ugu kalsoon yahy Mr Kim.
Balse, Pompeo wuxuu ka gaabsaday inuu wax ka yidhahdo shirka ay yeelan doonaan Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim iyo Madaxweynaha Mareykanka Trump xilliga uu dhacayo.
Generaal Kim Yon-chol oo ah xubin uu si weyn ugu kalsoon yahay madaxweyne Kim oo haatan ku sugan Mareykanka ayaa waxa la filayaa Dhambaal uu ka sido Kim Jong-un inuu gaarsiiyo Madxweyne Trump Maalinta Jimcaha.